Hamba Kahle Ehlobo!
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Patricia
Kuyashisa e-Phoenix! Phuma ekushiseni uye kule ndawo yokubalekela epholile ephayini lezintaba!
Ikhabethe elihle elingamamitha-skwele angama-2500 liyaqashwa eduze kwaseHappy Jack AZ. 120 Miles North of Phoenix, ungaba sePines epholile yase-Arizona.
Ikhabethe Lokungena e-Arizona High Country eduze ne-Happy Jack.
Ifakwe ngokuphelele 3 level ekhaya. Izinga eliphezulu lifaka igumbi elikhulu elikhulu elinombhede wenkosi, i-en suite kanye ne-balcony. I-loft inombono omuhle ngaphandle kwamafasitela amakhulu, futhi inombhede wokucasha wokulala okwengeziwe.
Isitezi esikhulu sinamagumbi okulala amakhulu angu-2 1 anombhede olingana nenkosi, amanye anombhede osayizi wendlovukazi. Igumbi lomndeni, ikhishi, igumbi lokudlela, igumbi lokugezela kanye nelondolo.
Isitezi esiphansi sinegumbi elingaphansi eligcwele elinegumbi lomdlalo elifaka itafula lephuli, itafula le-foosball kanye ne-air-hockey. Omunye umbhede wokucasha usendlini engaphansi, nokho kungase kubande kancane endaweni engaphansi ebusika.
I-TV yesathelayithi Iyatholakala, ayikho i-inthanethi.
Isevisi yeselula iyatholakala (akubona bonke abathwali abanesevisi) - okungcono kakhulu nge-Verizon. Uma i-inthanethi idingeka, ungakwazi ukuthola i-hotspot kusuka kufoni yakho.
4.95 ·19 okushiwo abanye
Indawo eseceleni enezinkatho ezinkulu kanye nesango lokungena.
Indawo eyi-acre engu-2.5 enokubukwa okuhle, ehlala ehlathini laseCoconino phakathi kwezihlahla zikaphayini.
Hlangana (okungenzeka e-Phoenix) ngaphambi kokufika. Noma nge-Skype kanye ne-imeyili uma kungenjalo mathupha.
UPatricia Ungumbungazi ovelele